बीमा संस्थानको ४२.११ प्रतिशत बोनसको प्रस्ताव पारित | गृहपृष्ठ
Home लगानी बीमा संस्थानको ४२.११ प्रतिशत बोनसको प्रस्ताव पारित
on: November 03, 2017 लगानी
बीमा संस्थानको ४२.११ प्रतिशत बोनसको प्रस्ताव पारित
आगामी असार मसान्तसम्म २ अर्ब चुक्तापूँजी पुर्याउने योजना
कात्तिक १७, काठमाडौं (अस) । राष्ट्रिय बिमा संस्थानले ४२ दशमलव ११ प्रतिशत बोनस शेयरको प्रस्ताव पारित गर्दै शुक्रवार ३० औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । संस्थानका अध्यक्ष खोमराज खरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त सभाले बोनस शेयरसँगै यसमा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि रू. २७ लाख २२ हजार १ सय ५ बराबरको नगद लाभांशको प्रस्ताव समेत पारित गरेको हो ।
संस्थानले आर्थिक वर्ष ०६३/६४ सम्म कायम रू. १२ करोड ९३ लाख चुक्तापूँजीको ४२ दशमलव ११ प्रतिशतका दरले हुन आउने रू. ५ करोड १७ लाख २० हजार बोनस शेयर वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको हो । बोनस शेयर वितरण पश्चात संस्थानको चुक्तापूँजी रू. १८ करोड १० लाख २० हजार पुग्नेछ । संस्थानले २०५८/५९ देखि २०६३/६४ सम्मको लाभांस बितरण गर्न लागेको हो ।
यस अवधिसम्म कायम चुक्तापूँजीमा नेपाल सरकारको २७ दशमलव ७८ प्रतिशतले रू. ३ करोड ५९ लाख १६ हजार ७ सय, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ५५ दशमलव ५५ प्रतिशतले रू. ७ करोड १८ लाख ३३ हजार ३ सय र नेपाल बैङ्क लिमिटेडको १६ दशमलव ६७ प्रतिशत रू. २ करोड १५ लाख ५० हजार गरी रू. १२ करोड ९३ लाख शेयर स्वामित्व रहेको छ ।
संस्थानले आव ०६८/६९ सम्मको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भई अन्तिम प्रतिवेदन आउने क्रममा रहेको र त्यसपछिको आव ०७१/७२ सम्मको लेखा परिक्षण गर्ने कार्य शुरु भएको बताएको छ । संस्थानले लेखापरिक्षणमा गरेको ढिलाई र आर्थिक पारदर्शिताका विषयमा संस्थापक सदस्यहरुले जिज्ञासा राखेका थिए । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको संस्थानको आर्थिक पारदर्शिताको अवस्था निरासाजनक भएकोमा सदस्यहरुले दुख व्यक्त गरेका थिए । उनिहरुको जिज्ञासालाई संस्थानका अध्यक्ष खोमराज खरेल, निमित्त प्रशासक सुरेन्द्र थापा लगाएत अन्य सञ्चालकहरुले प्रष्ट पारेका थिए । संस्थानले पहिला गरेको कमजोरीको अवस्था अहिले नरहेको र आर्थिक पारदर्शितालाई व्यवस्थित गर्ने तर्फ लागिपरेको अध्यक्ष खरेलले प्रष्ट्याएका थिए । निमित्त प्रशासक थापाले कमिकमजोरीलाई सुधार्दै आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा ०७२/७३ सम्मको लेखा परिक्षण स्वीकृत गराई साधारण सभा सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
बीमा समितिबाट आव ०६५/६६ सम्मको लेखा परिक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गराईसकेको बीमा संस्थानले त्यस पछिको प्रतिवेदन स्वीकृतिको प्रकृयामा रहेको जानकारी गराएको छ । बीमा समितिले दिएको निर्देशन अनुसार आगामी असार मसान्तसम्म रू. २ अर्ब चुक्तापूँजी पुर्याउने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट पारित गरी अर्थमन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पेश गरेको समेत बताएको छ ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानले यसअघि जीवन र निर्जीवन दुवै व्यवसाय गर्दै आएकोमा ०७१ साउन १८ गतेदेखि निर्जीवन बीमा व्यवसाय राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमार्फत गर्दै आएको छ ।